February 2020 – Xogsoor News Network
Ciidanka Dowlada dhexe oo hakad ku sameeyay isku socodka Magaalada.
Mareykanka oo Duqeeyay Saldhig Shabaab ku Lahaayeen degmada Jilib ee Jubbada dhexe
Ilhan Cumar oo la aqal gashay nin lagu xaman jiray
Ciidamada Maamulka Jubbaland oo u ruqaansadey dhanka Balad Xaawo
Duqa Magaalada Muqdisho Cumar Finish “Adeega Forex Iyo Al-Shabaab Waa ..
Hoggaamiyaha Guud Ahlusunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax ayaa goordhow ku dhawaaqay in uu guud ahaan ururka uu ka tanaasulay Siyaasadda maamulka Galmudug. Macalin Maxamuud oo la hadlayay saxaafada ayaa sheegay inaysan aqbali karin in dad shacab ah ay ku dhintaan dagaalo ka dhaca Galmudug sidaa awgeedna ay uga tanaasuleen […]
HALKAAN KA DAAWO MUUQAALKA: :- Cali Ugaas Cabdulle oo sheegay in abgaal dulqaadkii kadhamaaday.
Xildhibaan Mahad Salaad Galmudug ha looga turo colaada laga soo abaabulayo Villa Soomaaliya
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay xiisada dagaal ee ka taagan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Mahad Salaad ayaa marka hore ka tacsiyeeyey dadkii ku dhintay dagaalladii ka dhacay gudaha degmada Dhuusamareeb, isaga oo ku dhaawaca ah u […]
SAWIRRO: Burburka soo gaaray xeradii Inji ee ay ku jireen Masuuliyiintii Ahlu suna
Burbur xooggan ayaa soo gaaray Xerada Inji ee magaalada Dhuusamareeb oo ay ku dagaalamayeen muddo ka badan 24 saacadood ciidamada ahlu suna iyo kuwa DF. Madaafiic xoogan oo ku dhacday dhismeyaasha ku yaalla gudaha xerada ayaa sababay burbur xoogan oo soo gaaray derbiyada iyo saqaafka sare ee guryaha iyo hoolalka […]
DAAWO:- Ahlu Sunna oo ‘hubkeeda iyo gaadiidkeeda ku wareejisay’ dowladda Soomaaliya
Waxaa goordhaw magaalada Dhuusomareeb warbaahinta loogu soo bandhigay lana hadlay Madaxii hore ee Xukuumada Galmudug Sheekh Shaakir Cali Xasan oo saakay isaga iyo hogaanka kale ee Ahlu sunna isku soo dhiibeen ciidanka dowlada . Sheekh Shaakir ayaa sheegay in ay go’aansadeen in ay soo afjaraan dagaalkii iyo dhibaatadii kale ee […]
War Saxaafadeed kasoo baxay dowlada federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowlada Kenya faragalin ka wado xadka ay wadaagaan labada dowladood gaar ahaan dhinaca Mandheera. Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqday dowlada Kenya in si deg deg ah u joojiso xadgudubyada ka dhanka ah madaxbannaanideeda dalka iyo falalka xasillooni darrada […]
DEG DEG:- Dil Goordhow Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Wararka Idacada dalsan ay ka heleyso degmada Dharkenley ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya in goordhow halkaas uu ka dhacay dil iyada oo warar kala duwana ay kasoo baxayaan. Dilka ayaa ka dhacay halka loo yaqaan Jaayga Kaawa-gode una dhaxeysa Walaalaha iyo dhagaxa Turkiga,waxaana la sheegay in nin hubeysan uu rasaas ku […]
Dagaal culus oo kasocda Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimada Maamulka Galmudug.
Wararka naga soo gaarayo Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Maamulka Galmudug ayaa sheegayo inuu halkaas ka qarxay dagaal culus oo u dhaxeeyo Ciidamada Dowladda iyo kuwa Ahlu Sunna. Dagaalka ayaa waxaa uu ka socdaa meel u dhow Xarunta Inji ee Hooyga u ah Madaxda Ahlusunna, waxaana Goobjoogayaal ku sugan Dhuusamareeb ay […]
Akhriso:-Wadaado ku jira Inji ayaa soo weeraray Ciidamada Galmudug.
War-Saxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug oo ay dowladda aqoonsan tahay Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor) ayaa waxa looga hadlay dagaalkii xalay ka dhacay Magaalada Dhuusamareeb iyo sida uu ku bilaawdey,iyada oo eedeyn loogu jeediyey hoggaanka Ahlusunna. Qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in Gaari Ciidan oo ay leeyihiin […]
Ra’iisul wasaaraha Japan oo amray in la xiro dhamaan Schooladda dalkaasi mudo bil ah.
Raiisel wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa maanta amartay in la xidho dhamaan iskuulada kuyaala wadanka mudo bil ah si loo joojiyo faafitaanka coronavirus. Shinzo Abe waxa uu yiri: ‘Dowladdu waxa ay tixgalineysaa caafimaadka iyo badbaadada carruurta wax kale Maya. “Waxaan ka codsaneynaa dhammaan dugsiyada hoose, dhexe iyo sare … […]